नेपाल आज | भारतमा भन्दा पहिले नेपालमा कम्पुटर बनाउने बैज्ञानिक, सिंहदरबारले चिन्न नसकेको प्रतिभा
भारतमा भन्दा पहिले नेपालमा कम्पुटर बनाउने बैज्ञानिक, सिंहदरबारले चिन्न नसकेको प्रतिभा
आइतबार, १२ मङि्सर २०७३ गते प्रकाशित - नेपाल आज (MG)
‘यो कालो गेट नै बेगुनी रहेछ । यहाँभित्र पस्दा मान्छे सञ्जन देखिन्छ, बाहिर गएपछि के हुन्छ के ?’ उमेरले ७४ पुगेका मुनिबहादुर जीबनको कथारुपी पोको खोल्दै थिए । काठमाडौँको घट्टेकुलो चोकमा पर्खालले घेरिएको सेतो घर छ । ढोका खोलेर भित्र पसेपछि एउटै कम्पाउण्डमा ३ वटा घर रहेको थाहा हुन्छ ।
एउटा घर आवास हो । दोस्रो कार्यालय र तेस्रो कम्पुटर संग्रालय । मुनिबहादुरको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री र अनेक मन्त्रीका फोटा झुण्डिएका छन् । दुई जना प्रधानमन्त्री र धेरै मन्त्रीले पाइला टेकेको संग्रालय देखाउँदै उनी भन्छन्, ‘राज्यले गर्न नसकेको काम गर्नु भएछ । तपाईलाई सरकारले सहयोग गर्छ भनेर फर्कनुहुन्छ । तर, देशमै कम्पुटर उत्पादन गर्ने र निर्यात गर्ने विशाल ल्यावको सोच पूरा गर्न कुनै सरकारले सहयोग गरेनन् ।’
उनको नीजि घरभित्र कम्पुटरसम्बन्धी के छैन, एबाकसदेखि अहिलेसम्मको सबै प्रविधि र उपलब्धी संग्रहित छ । जापान र भारतमा समेत कम्पुटर अनौठो रहेको बेला मुनिबहादुरले कम्पुटरमा हात हालिसकेका थिए ।
मुनिबहादुर शाक्य १९७९ मा कम्प्युटर बनाउदै थिए । अनेक प्रयत्नपछि उनको प्रयास सफल भयो । दिनरात कम्प्युटर बनाउने काममा लागिरहेका उनी आफैलाई उनले बनाएको त्यो यन्त्र नेपालको पहिलो कम्पयुटर हुन्छ भन्ने थाहा थिएन । पछिमात्र थाहा पाए, उनले नेपालमा कम्प्युटर बनाइसक्दा भारतमा समेत कम्प्युटर बनिसकेको थिएन ।
अहिलेका आइबिएम, एप्पल, माइक्रोसफ्टलगायतका चर्चित कम्पनीहरु त्यो समयमा माइक्रो कम्प्युटर बनाउन अनुसन्धानमा व्यस्त थिए । ठूल्ठूला कप्पनीका बडे बडे अनुसन्धानकर्तालाई पछि पार्दै मुनिबहादुरले नेपालमा एक्लै कम्पुटर बनाएर दुनियाँलाई चकित पारेका थिए । बेलायतमा निर्माण भएको माईक्रोप्रोसेसरबाट उनले कम्प्युटर बनाएका थिए । उनी आफैले पावरसप्लाई युनिट र भिडियोकार्ड बनाए । अमेरिकाबाट किबोर्ड ल्याएका उनले रसियन टिभीको मनिटरमा जोडेर कम्प्युटरको चमत्कार देखाईदिए ।
सयुंक्त राष्ट्रसंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको दक्षिण एशियाली वैज्ञानिकहरुको सम्मेलनमा उनले आफुले बनाएको कम्पुटर देखाए । छोटो समयमा तिब्र गतिमा काम गर्न सक्ने सानो कम्पुटर देखेर सबै चकित परे । नेपाल प्रविधिमा अघि रहेको सन्देश प्रवाहित भयो । उनको पहिचान विश्वफर फैलिँदै गयो । चीनको सिन्ह्वा न्युजले ‘नेपाली बैज्ञानिकले कम्प्युटर बनाए’ भन्ने समाचार प्रकाशित गर्यो। अन्तराष्ट्रिय न्युज एजेन्सीको सो समाचारलाई बेलायत, फ्रान्स, अमेरिकालगायतका देशका संचारमाध्यमले समेत पछ्याए । आफ्नै देशमा पढेर फर्केको व्यक्तिले नेपालमा तहल्का मच्चाएको समाचार बाहिरिएपछि फ्रान्स र बेलायतले उनको खोजी गरे । उनी समक्ष अवसरको चाङ लाग्न थाल्यो । उनका बारेमा अन्तराष्ट्रिय जगतले चासो देखायो । तर, देशमा भने उनी अपरिचितजस्तै रहे ।
मुनिबहादुर नेपालमै केही गर्न चाहन्थे । ‘म्यान’ नामक संस्थाले नेपालमा कम्पुटर सिकाउने तालिमका लागि शाक्यलाई आग्रह गर्यो। कम्पुटर प्रोगामसम्बन्धी जानकारी दिनका लागि आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मोहनमान सैजुले गरे । तर, तालिम लिनको लागि युवा र विद्यार्थी कोही भएनन् ।
जसोतसो गरेर सरकारी कर्मचारीहरु उनको कार्यक्रममा उपस्थित भए । कर्मचारीहरु कम्युटरमा डाटाईन्ट्री लगायत अन्य काम गर्न एक हप्तामा नै पोख्त भए । ति पोख्त हुने मानिसहरु टेक्नीकल ज्ञान भएका थिएनन् । कार्यक्रमको अन्त्य हुने दिन सैजुले भने ‘एकहप्तामा तपाईहरु यति धेरै जान्ने भईसक्नुभएको छ । गर्ने हो भने १ वर्षमा के गर्न सकिदैन ? मुनि शाक्य जस्तो हामीलाई मान्छे चाहिएको छ । नेपाललाई आईटी क्षेत्रको केन्द्र बनाउनुपर्छ । ’ सैजुले त्यती भन्दा शाक्य खुसीले गद्गद् भएका थिए ।
जुग बितिसक्यो, व्यवस्था पटक पटक फेरियो तर कम्पुटर केन्द्र बन्न सकेन ।
सन् १९४२मा पाटनमा जन्मिएका शाक्य सानैदेखि असाधारण प्रतिभाको धनी थिए । रोचक र अनौठो काममा उनी सानैदेखि रमाउथे । पाटन हाईस्कुलबाट एसएलसी गरे । त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट आईएस्सी गरे ।
शाक्य आईएस्सी सकेपछि पढ्नको लागि सन् १९६५ मा भारत गए । वेस्ट बंगाल कलकत्तामा गएर उनले रेडियो ईलेक्ट्रोनिक्स ईन्जिनियरिङ पढ्न थाले । रात्री कक्षा थियो । क्याम्पसबाट फर्कदा रातको १२ बजिसकेको हुन्थ्यो । गृहकार्य उनले राती नै भ्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । किनकी, उनी दिउसो इन्जिनियरिङ फर्ममा सुपरभाईजरको काम गर्थे ।
२३ वर्षे बैशालुवयमा उनले गरेको संर्घष देखेर सबैजना दंग पर्थे । गृहकार्य सक्दानसक्दै तीन बजिसकेको हुन्थ्यो । ‘जम्मा ३ घण्टा सुतेर त्यो ५ वर्ष मैले कसरी बिताए, त्यो मलाई मात्र थाहा छ । त्यो ठाउमा कसरी बसँे, कसरी कसरी पढेँ । खै कसरी भन्नु ? ’ उनी भुँयमा एक तमास हेरिहे ।
शाक्य १९६९ मा नेपाल आएर रेडियो नेपालमा टेक्निकल डिर्पाटमेन्टमा काम गरे । खुमलटारमा १०० किलोवाटको टावर स्विस सरकारले सहयोगमा दिएको थियो । त्यसको प्राविधिक प्रमुख भए । त्यतीबेला बेलायतबाट ३ जना इन्जिनियर आएका थिए । शाक्यको कामप्रतिको लगनशिलता र नविन सोचले उनीहरु प्रभाबित भए । शाक्यलाई चार्टर ईन्जिनियरिंग गर्नको लागि बेलायत बोलाए । नेपाल सरकारले शाक्यलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्यो । चार्टर इन्जिनीयरिङ मास्र्टस गरेका व्यवसायिक मान्छेहरुले मात्र पढ्न पाउथे । तर, उनले त्यो सौभाग्य आफ्नो पौरख र क्षमताले पाए । उनी पढाइमा अब्बल दरिए, शिक्षक र विद्यार्थीका माझमा उनी आर्कषणको केन्द्र बने ।
चार्टर इन्जिीनियरिङ सक्ने बित्तिकै शाक्य उतैबाट अमेरिका घुम्न गए । अमेरिकामा नेपालीको नाकमुख देख्न नपाइने बेला थियो त्यो । उनले अमेरिकाको आईटी कम्पनीमै काम शुरु गरे । तलबसुविधा राम्रै थियो तर उनी नेपाल फर्किए । ‘नेपाल नजाउ भनेर धेरैले सम्झाए । तर मेरो मनले मानेन । केही गर्ने सोचले नेपाल फर्के । केही समयपछि फेरी फ्रान्सबाट छात्रवृत्ति पाएँ ।’ नागवेली जीबनयात्रा फुकाउँदै शाक्यले भने ।
दुई बर्षे फ्रान्स बसाइमा शाक्यले माइक्रोप्रोसेसरबाट कन्ट्रोलर र भिडियो कार्ड बनाए । सन् १९७९ मा उनी नेपाल फर्के । नेपालमा पहिलो पटक कम्पुटर बनेको खबर धेरैका लागि पत्यारिलो थिएन । यसै मेसोमा शाक्यलाई रेडियो नेपालले अन्तरवार्ताका लागि बोलायो । उनले रेडियोमा कम्पुटर के हो र कस्तो हुन्छ, कसरी बन्यो भन्ने बारेमा विस्तृत जानकारी दिए । रेडियो नेपालको एकछत्र राज रहेको सो बेला उनको अन्तरवार्ताले धेरैको ध्यान खिच्यो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रत्नशमशेरले उनलाई फोन गरे । शाक्यलाई लिन आयोगको गाडी उनको घरमै आयो । ‘म यस्तो रेडियोमा अन्र्तवार्ता सुन्ने मान्छे नै होइनँ । तर, कम्प्युटर भनेपछि तपाईको अन्र्तवार्ता सुरुदेखि अन्तिमसम्म सुनेँ ।’ राजशी ठाँटका राणाले भेट्न नपाउँदै भने, ‘तपाई भाग्यमानी ।’ राणाले शाक्यलाई देशविदेशमा चिनाउन भुमिका निर्वाह गरे । १९८० मा कम्प्युटर वैज्ञानिकहरुको निमन्त्रणामा उनी अमेरिका हानिए । अमेरिकाको दोस्रो यात्रामा उनलाई जागिर खाने भन्दापनि धेरै सिक्ने हुटहुटी थियो ।
त्यतिबेला एप्पल कम्पनीले जम्मा ८० किलोबाइट क्षमताको कम्प्युटर बनाएको थियो । उनले ९०० सय किलोबाईट क्षमताको कम्प्युटर बनाए । अमेरिकामा गएर उनी सबै काममा सफल भए । अमेरिकामा प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै उनी नेपाल फर्किए । एकाग्र भएर उनी कम्प्युटर बनाउन लागिपरे । उनले नै नेपालमा देवनागरी लिपीमा लेख्ने कम्प्युटर सन् १९८३ मा बनाए । राष्ट्रिय गान श्रीमान गम्भीर नेपाली टाइप गरेर प्रिन्टमा देखाए । त्रिचन्द्र कलेजमा प्रर्दशनीमा आयोजना भयो । त्यहा उनले सबै प्रविधि सित्तैमा देखाईदिए ।
नेपालीमा प्रिन्ट भएको राष्ट्रिय गान देखेर बौद्धिक बर्गमा मानिसहरु ‘यो पो हो कम्प्युटर ? यस्तो पो हुँदोरैछ कम्प्युटर भनेको ?’भनेर अचम्म मान्थे । ‘त्यो प्रर्दशनीमा प्रवेश शुल्क राखेनौँ । पैसा उठाउने लक्ष्य थिएन । हजारौँ मानिसहरुले कम्प्युटर देख्न पाए ।’ शाक्य सन्तुष्टि व्यक्त गर्दछन् ।
शाक्यले देवनागरी लिपीमा लेख्ने कम्प्युटर बनाएको खबर भारतमा पनि चर्चित बन्यो । भारतमा कम्पुटर बनेको थिएन । देवनागरिक र भारतीय लिपी उस्तै भएकाले उनका लागि भारतबाट आग्रह आउन थाल्यो । ‘अमेरिका छाडेर आएको म भारतले बोलाउँदैमा किन जान्थे, गइनँ ।’ शाक्यले हास्दै भने, ‘नेपालमा बनाउने भारतमा निर्यात गर्ने हो भन्ने लाग्यो ।’ उनलाई अहिले नेपाल र भारतको अन्तर देख्दा विस्वास नै लाग्दैन । ‘सरकारले साथ दिएको भए दक्षिण एसियाको धेरै देशहरुले नेपालबाट कम्प्पुटर खरिद गर्थे । कोरियाबाट काम गर्न नेपाल आउथे । नेपाल यो अवस्थामा नै रहने थिएन ।’ उनले मनको बह व्यक्त गरे ।
सरकारसँग उनले कम्पुटर परियोजनाका लागि आग्रह गरिरहे । योजना प्रस्तुत गर्दै गए । हुँदैन भनिएन तर सहयोग पनि गरिएन । केही सिप नलागेपछि उनी एक्लै तम्सिए । सन् १९८५ मा उनले हाइटेक पायोनियर नामको कम्पनी खोले ।
त्यसको १२ वर्षपछि उनले सन् १९९७ मा जेएनआइसिटी नामको इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी खोले । उनले यो भन्दा अगाडी कम्प्युटर म्यानुफ्याक्चर कम्पनी सन मुन कम्प्युटर इन्डस्ट्री चलाईसकेका थिए । हातले नै कम्पुटर बनाउथे शाक्य । सन् १९९५ मा करोडौँ खर्चेर उनले कम्पुटर बनाउने मेसिन भित्राए ।
‘हात्तिजत्रो मेसिन आएको भनेपछि कर्मचारीले अनेक केरकार गरे । ‘चुरोट, रक्सी बनाउने मेसिनको चाही जम्मा ५ प्रतिसत भ्याट लिने । जसले समाज बिर्गाछ । राम्रो काम गर्न ल्याको मेसिनलाई किन १५ प्रतिसत ?’ शाक्यले प्रश्न गरे । कर्मचारी के मान्थे ?अनेकौँ प्रयासपछि उनले ५ प्रतिसत कर तिरेर यन्त्र काठमाडौँ ल्याए ।
उनले सो मेसिन ल्याउँदा अनामनगरमा एकाध लाखमा रोपनी पाइन्थ्यो । मेसिन ल्याउन खर्चेको पैसा उनले जमिनमा हालेको भए अरबौँको हुन्थ्यो । यस्तै भन्नेहरु धेरै छन् । तर, ज्ञानका प्यासी उनलाई पैसासँग यन्त्रको तुलना गर्न मन लाग्दैन । उनले करिब डेढ दर्जन हार्डवेयर र सफ्टवेयर उत्पादन गरेका छन् । उनले एउटै कम्प्युटरमा भएको कामलाई दुईसयभन्दा बढी कम्प्युटरबाट हेर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरेका छन ।
शाक्यले बनाएका अन्य थुप्रै रोचक प्रविधिहरुमा मानवसरहको रोबर्ट, सेक्युरिटी यन्त्र उपकरण र अरु थुप्रै कम्प्युटर पार्ट्सहरु रहेका छन् । ए ब्रेन अफ कम्प्युटर, बुफेल्लो कम्प्युटर, सुपर कम्प्युटर, नेपाली रोबर्ट्स उनले निर्माण गरेका केही उत्कृष्ट नमुनाहरु हुन् । उनको सुपर कम्पयुटर १६ वटा कम्युटर एकै ठाउबाट चल्थ्यो । यो कम्प्युटर अत्यन्तै पावरफुल थियो । पछिल्ले समय उनले बनाएको ग्रिन कम्प्युटर थोरै पावरमा चल्ने अर्थात सोलारबाट पनि चल्ने थियो ।
ग्रिन कम्प्युटरलाई लिएर थुप्रै टेक्नोलोजीका मानिसहरुले अबको जमाना ग्रिन कम्प्युटरको जमाना समेत भने । उनले कम्प्युटर निर्माण गरी कृषि विकास बैंकलाइ २० ओटा र अरु आइएनजिओलाइ केही कम्प्युटर बेचे । उनको उत्पादन उच्च गुणस्तरिय भएतापनि सरकारले स्वदेशी वस्तु प्रोत्साहनलाई ध्यानमा राखेन । उनको कम्प्युटरको गुणस्तरीयमात्र थिएन, आयातित कम्पुटरभन्दा ३० प्रतिसत सस्तो थियो । विदेसी कम्प्युटरको प्रवेशसंगै उनको उत्पादन ओझेलमा पर्न गयो । राष्ट्रको ईज्वतको रुपमा चिनिएका शाक्यको प्रतिभाको सम्मान कुनै पनि सरकारले गरेन ।
यसैबीच उनले २० वाट भन्दा कम विद्युत खपत गर्ने ग्रिन कम्प्युटरको विकास गरी कालीकोट लगायतका केही जिल्लामा टेलिमेडिसिन समेत सञ्चालन गरिरहेका छन् । बोलेको कुरा कम्प्युटरले आफै लेख्ने सिस्टमको विकास उनले सन् १९८६ मा नै गरेका थिए ।
पानी खोल्न, बत्ति बाल्न र निभाउन, रेडियो बजाउन, बन्द गर्न छुनै नपर्ने, शाक्यले यी सबैकुरा आफ्नो आवाजबाटै गर्थे । उनले हालसम्म भ्वाइस रिकग्निसन सिस्टम, भ्वाइस डिक्सनरी, कम्प्युटर सहायता शिक्षा, नेपाली टु इंगिलस र इंगिलस टु नेपाली डिक्सनरी, विकिरण मनिटर, नेपाली सबटाइटल डिस्प्ले, नेपाली मल्टिमिडियालगायतका प्रोगाम निर्माण गरेका छन् । रोबोटिक्स र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा औधी रुचि राख्ने उनी कुशल तबला वादक पनि हुन् ।
उनी विश्वका विभिन्न १० ओटा भाषा बोल्न सक्छन् । शाक्यको एउटा घर अहिले पनि उनले बनाएका कम्प्युटर र अन्य देशमा बनेका ऐतिहासिक कम्प्युटर सामग्रीहरुको म्युजियम नै छ । नेपालसरकारले अझैसमम पनि उनको जस्तो ऐतिहासिक कम्प्युटरहरु भएको संग्राहलय बनाउन सकेको छैन । उनको म्युजियममा देशका विभिन्न क्षेत्रबाट विद्यार्थीहरु समेत आउने गरेका छन् । सुचना प्रविधिमा योगदान पुर्याएका महाविर पुनलाई समेत शाक्यले आफैले बनाएको १६ वटा कम्प्युटर अत्यन्तै सस्तो दाममा उपलब्ध गराएको बताउछन । भन्छन ‘केही गर्छु भन्नेको लागि मैले गरेकै छु । सबैले गरोस् र केही सिकोस् भन्ने मेरो चाहना हुन्छ ।’
सरकारले उनको कामलाइ सम्मान, सहयोग र प्रोत्साहन गरेर अघि बढ्न नसकेको शाक्यको गुनासो छ । सरकारले केही गरेको भए आइबिएम, माइक्रोसफ्ट जस्ता कम्पनिहरु यहि बन्ने सम्भावना थियो । उनी भन्छन ‘म आफै फ्रान्स, बेलायत, अमेरिकाको ठूल्ठूला अवसर छोडेर नेपालमै केही गर्छु भनेर आएँ । तर, सरकारले कहिल्लै हेरेन । गर्नको लागि नेपालमा धेरै गरें । तर, जति सोचेको थिएँ, त्यो सम्भव हुन दिएनन् । ’
computer scientist first nepali to make computer before the indians muni bahadur shakya
शहीद हुनबाट यसरी जोगियो नारायणगोपालको त्यो गीत (भिडियोसहित)
इटहरीस्थित बिग बार एन्ड रेस्टुरेन्टमा आगलागी, करोडौंको क्षती
माल्दिभ्सले दियो नेपाललाई ९५ रनको लक्ष्य
के तपाई पनि तातोपानीले नुहाउनुहुन्छ ? उसो भए यी कुरामा ध्यान दिनुहोस
संघर्षको तीन वर्षमा संगीतालाई स्वर्ण पदक